Mugaabe oo Midowga Afrika ugu deeqay boqolaal neef oo lo’ ah. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweynaha dalka Zimbabwe, Robert Mugabe waxa uu guddoonsiiyey Ku-xigeenka Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika, Erastus Mwencha 300 oo neef oo lo’ ah munaasabad Khamiistii la soo dhaafay lagu qabtay Xafiiska Madaxweyne Mugabe.
Deeqdaasi ayaa loogu talagalay inay taageero ka geystaan sidii Ururka Midowga Afrika hoos uga dhigi lahayd ku-tiirsanaanshaha Deeqaha Dibedda.
Lo’da loogu deeqay Midowga Afrika ayaa waxaa lagu hayaa meel ku dhow Degmo yar oo ku taalla W/bari ee caasimadda dalka Zimbabwe ee Harare.
Xildhibaan Kindness Paradisa oo Madaxa ka ah Guddiga Barlamaanka Zimbabwe ugu qaabilsan Arrimaha Dibedda ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka ee AFP inuu Madaxweyne Mugabe ugu yaboohay AU-da 300 oo neef oo lo’ ah oo uu ballan qaaday inuu bixin doono sannadkii hore, xilligaasi oo uu ahaa Guddoomiyaha Xilliga ee Ururka AU-da.
Xildhibaanka waxa uu tilmaamay in Lo’daasi lagu hayo Beer ku taalla Deegaanka Karoi, isla markaana ay AU-da awood u leeyihiin inay go’aansan karaan waxay ku samayn doonaan Xoolahaasi.
Waxa kale oo uu tilmaamay inuu Madaxweyne Mugabi ugu tala galay Yaboohaasi Qaaraanka Hay’adda “The AU Foundation”, taasi oo horseedi karta madax-bannaani Maaliyadeed.
Madaxweyne Mugaabe oo xilka Madaxtinimadda Wareegta ee AU-da hayey ilaabishii hore waxa uu sheegay inuu doonayo inay Lo’da qeyb ka qaadato si loo sameeyo in Hay’adda horey u sii socoto, wuxuuna hoosta ka xariiqay inuusan marnaba jirin qof ku fekeray in Haddiyad ahaan Lo’ loo siiyo Ururka AU-da.
“Dad lo’ley ah baan nahay, maxaan u samayn weynay inaan Lo’da haddiyad u siino Ururka AU-da” ayuu yiri Madaxweynaha 92-jirka oo la hadlay Wargeyska Dowladda Zimbabwe ee Herald.
Dhinaca kale, AU-da waxay Mugabe uga mahadceliyeen Twitterka, iyagoo ku tilmaamay Hoggaamiye tusaale ah inay Afrika awood u leedahay inay maalgeliyaan Horumarinta Afrika.
Kaalmadda Lo’da ee uu Mugabe guddoonsiiyey AU-da ayaa ku soo beegantay, iyadoo ugu yaraan 3 million oo qof oo ku nool dalka Zimbabwe u baahan yihiin Gargarka cunto, kadib, markii abaaro xun ku habsatay dalkaasi.
Nin 14 qof oo ay ku jiraan Waalidkiisa ku gawracay Hindiya.